Amanqanaba ama-5 e-Knee Arthrosis [Ungayikhulisa njani i-Osteoarthritis kwi-Knees]
Izigaba ezi-5 zeKneartrose
06 / 10 / 2018 /0 Amazwana/i I-Osteoarthritis (Osteoarthritis), idolo, rheumatism/av ubuhlungu
Ngaba ubusazi ukuba isifo samathambo samadolo sahlulahlulwe ngokwamanqanaba amahlanu kuxhomekeka kubungakanani bayo? Isifo samathambo sidla ngokujamelana nokudibanisa edolweni kwaye kunokubangela iingxaki ezinkulu zomsebenzi kunye nentlungu. njengoko impilo edibeneyo iwohloka.
Silwela abo banolunye uvavanyo olungapheliyo lweentlungu kunye ne-rheumatism ukuze babe namathuba angcono onyango kunye nophando. Njengathi kwiphepha lethu le-FB og ijelo lethu le-YouTube kwimidiya yoluntu ukuba usijoyine kumlo wokuphucula ubomi bemihla ngemihla kumawakawaka abantu.
Eli nqaku liza kudlulela kumanqanaba amahlanu ahlukeneyo okuba isifo samathambo samadolo. Ezantsi kwenqaku unokufunda kwakhona izimvo zabanye abafundi, kunye nokubukela ividiyo kunye nemithambo elungiselelwe abo banesifo samathambo samadolo. Sahlulahlula amadolo ngamadolo ngamanqanaba alandelayo:
Isigaba ngasinye sineempawu ezizodwa kunye neempawu. Funda ngakumbi malunga nayo ngezantsi.
ICEBISO: Abantu abaninzi abane- osteoarthritis bayathanda ukuyisebenzisa iiglavu zoxinzelelo ezitshintshiweyo (Ikhonkco liyavula kwiwindows entsha) yokuphucula ukusebenza kwezandla neminwe. Oku kuqheleke kakhulu phakathi kwe-rheumatologists kunye nabo banengxaki ye-carpal tunnel syndrome. Mhlawumbi ikhona iinzwane zokutsala og ngokukodwa iisokisi zoxinzelelo ukuba ukhathazwa ziinzwane eziqinileyo nezibuhlungu- mhlawumbi ihallux valgus (inyawo elikhulu eliguqulweyo)
Funda: Oku ufanele ukwazi nge-Osteoarthritis yeeKnees
Inqanaba 0 le-osteoarthritis yamadolo lithetha ukuba idolo linempilo ehlanganyelweyo kwaye alibonisi zimpawu zamathambo okanye ukutshatyalaliswa ngokudibeneyo. Ukuze ube kwinqanaba 0, idolo kufuneka lisebenze ngokuhamba okugcweleyo kwaye ngaphandle kwentlungu ngexesha lokuhamba.
Unyango: Uthintelo lokuphuhlisa isifo samathambo lubaluleke kakhulu xa ukwinqanaba 0 kwaye ube nempilo edolweni. Olu thintelo ikakhulu malunga nokomeleza izihlunu ezisusa amadolo. Izihlunu ezibaluleke kakhulu zokukhulula amadolo abuhlungu zifunyenwe - ngokumangalisayo kwabaninzi - kwizihlunu zenyonga, ezimpundu nasemathangeni; njengoko kubhaliwe kuphando (1). Kule vidiyo zimbini zingezantsi uza kubona imizekelo yokuzilolonga kakuhle.
I-VIDEO: I-10 yamandla okuzivocavoca kwi-Hip (Cofa ngezantsi ukuqala ividiyo)
IVIDIYO: Izinto ezi-6 zokuzivocavoca ngokuchasene neKnee Arthrosis (i-Osteoarthritis yeeKnees)
Nazi iindlela ezintandathu zokuzilolonga ezithathela ingqalelo abo bachatshazelwe sisifo samathambo samadolo. Ukusetyenziswa rhoqo kwezi zixhobo zokuzivocavoca kubalulekile ukugcina ukuhamba kwegazi kwendawo, ukunciphisa imithambo yomzimba kunye nokuphucula impilo ye-meniscus. Imithambo inokusetyenziswa kwakhona kuthintelo.
Uyonwabile iividiyo? Ukuba ubasebenzise ithuba, singakuvuyela kakhulu ukuba ubhalisele ijelo lethu le-YouTube kwaye usinike isithsaba kumajelo eendaba ezentlalo. Kuthetha lukhulu kuthi. Umbulelo omkhulu!
Ubuhlungu obungapheliyo kubomi bemihla ngemihla
Abantu abaninzi bathwaxwa ziintlungu ezingapheliyo ezichitha ubomi bemihla ngemihla Kungenxa yoko le nto sikhuthaza ukuba Yabelana ngeli nqaku kwimidiya yoluntu, Zive ukhululekile ukuthanda iphepha lethu le-Facebook kwaye uthi: "Ewe kuphando oluthe kratya kwizifo ezinganyangekiyo". Ngale ndlela, umntu unokwenza ukuba iimpawu ezinxulunyaniswa nesi sifo zibonakale ngakumbi kwaye aqinisekise ukuba abantu abaninzi bathathwa ngokungathí sina - kwaye ngenxa yoko bafumana uncedo abaludingayo. Siyathemba ukuba ukwanda kwengqwalaselo kungakhokelela kwinkxaso mali enkulu kuphando malunga novavanyo olutsha kunye neendlela zonyango.
Kwinqanaba loku-1 leedoloeo yamadolo umntu unokubona utshintsho oluncinci lokudakumba kwidolo elidibeneyo. Olutshintsho kwindlela yokunxiba lunokubandakanya ukubalwa okuncinci kunye notshintsho oluncinci kumalungu apho imilenze ihlangana khona.
Nokuba okwangoku akunakufumana ntlungu okanye ntlungu emadolweni. Ngokuqinisekileyo ayibikho ngenxa yokuguqa ngamadolo ngokwayo, kodwa izihlunu kunye nemisipha ejikeleze ikonzakalise njengabanye abaninzi.
Unyango: Ukuzivocavoca kunye nokuthintela ukuthintela imithambo kubalulekile ekukhuseleni inqanaba loku-1 ukuya kwinqanaba elilandelayo. Kwakhona, njengoko kukhankanyiwe kwicandelo elidlulileyo, ngakumbi uqeqesho lweehips, isihlalo kunye namathanga ekufuneka ujonge kuwo ukuba ufuna ukukhulula amadolo. Ukuba ukufumanisa kunzima ukuqeqesha ngendlela yesiko- emva koko sinokucebisa uqeqesho kwichibi lamanzi ashushu.
Ukuba unyuse imeko ye-osteoarthritis kunye nokunxiba okudibeneyo kusapho, izongezo zokutya ezinjenge glucosamine sulfate kunye ne chondroitin nazo zingalunga ngokudibeneyo nokuzivocavoca ngamadolo.
Inqanaba 2 le-osteoarthritis yamadolo isabizwa ngokuba kukukhupha okunobunono kokudibana okuhlangene emadolweni. Ngomfanekiso-ngqondweni, ofana ne-X-reyi, ngoku uya kuba nakho ukubona ukunxiba ngokudibeneyo kunye nokubalwa kwamadolo - kodwa intlala iya kuhlala ihleli kwaye intsha. Xa sithetha ngempilo entle ye-cartilage, sibhekisa, phakathi kwezinye izinto, kwi-meniscus kunye nomgama phakathi kwe-shins kunye ne-femur. Kumgama oqhelekileyo, le milenze ayizukuxokisana kwaye irubhe, kwaye kuyakubakho umxholo oqhelekileyo wokudityaniswa kolwelo (ulwelo oludibeneyo lwe-synovial) edolweni.
Ngokwesiqhelo liqondo le-osteoarthritis apho iintlungu zokuqala kunye neempawu (ngenxa yenciniba yamathambo ngokwayo) zivela. Iimpawu eziqhelekileyo kunye nentlungu ekuqaleni kunokuba buhlungu emadolweni emva kokuhamba okanye ukuhamba ngejog, kunye nokwandisa ukuqina kweedolo xa kungasetyenziswanga iiyure ezininzi. Ukugoba okanye ukugoba amadolo akho kunokuba nzima.
Unyango kwiNqanaba 2
Kwakhona, ukuzilolonga kunye nokuthintela kuyakudlala indima ebaluleke kakhulu- kwaye ngakumbi ukuthintela ukudibana kunye neenyembezi ekubeni mandundu. Ukuba ukufumanisa kunzima ukuqalisa ngokuzilolonga nokuzilolonga, sicebisa ngamandla ukuba uqhagamshelane nomzimba ngokusebenza kakuhle. Ukomeleza izihlunu ezijikeleze umdibaniselwano, ukuzinza kwamadolo kuyanda-okunciphisa amathuba okonzakala ngokudibeneyo.
Ukutyeba kakhulu yingxaki enegalelo ekunxibeni nangakumbi kumalungu athwele ubunzima- yiyo loo nto kanye kubalulekile ukuba ukunciphisa umzimba kubalulekile ukuba une-BMI (index mass mass index). Ukuba ukufumanisa kunzima ukuqala ngokwenza umthambo kunye nokuzivocavoca, sicebisa ukuba ubonane nonyango lomzimba ukuze uqalise ngokwenza umthambo olungileyo.
En ukuxhaswa kwento edolo (ivula kwifestile entsha) inokuba sisixhobo esiluncedo ekuzinziseni idolo ngelixa esonyusa ukuhamba kwegazi kwalapha ekhaya. Abantu abaninzi baqala ukuthatha iipilisi zentlungu kunye ne-NSAIDS xa beqala ukuqaqanjelwa ngamadolo, kodwa ngenxa yemingcipheko ebandakanyekayo ekusebenziseni ixesha elide- njengezilonda zesisu, iingxaki zentliziyo, ukonakala kwezintso kunye neengxaki zesibindi- ayisiyonto siyicebisayo. Kule meko, ukusetyenziswa kweziyobisi okunjalo kufuneka kwenzeke phantsi kweliso elibukhali likaGqirha wakho.
Kwinqanaba lesi-3, idreyini yokuguqa edolweni sele ilinganisile kwaye ukunxiba ngokudibeneyo ngoku sele kuqalile ukwanda. Oku kuthetha ukuba iimeko zesithuba ngaphakathi kwamadolo ziye zancitshiswa ngokucacileyo kwaye i-cartilage ibonisa iimpawu ezicacileyo zokulimala (kubandakanywa nokuthambeka ngokuthe tyaba kunesiqhelo).
Kuqhelekile kweli nqanaba ukuba i-osteoarthritis yedolo iqala ukuba buhlungu-kwaye nokuba imisebenzi eqhelekileyo njengokuhamba, ukugoba, ukubaleka kancinci okanye ukuguqa ngamadolo kubangela iintlungu. Ngenxa yokunxiba okukuko ngokudibeneyo, ngoku ungaqala ukuqaphela ukudumba nokujikeleza emadolweni ngokwako ukuba bekukho ubunzima kunye nomsebenzi.
Unyango kwiNqanaba 3
Kwakhona, siya kungena eringini size sihlasele uqeqesho-phantsi kwesakhelo esifanelekileyo. Yiyo kuphela kwendlela onokomeleza ngayo imisipha ejikeleze idolo ekhulula awona malungu adibeneyo- kwaye ukuba yeza kwifom yepilisi, wonke umntu ngewayethathe loo pilisi! Kodwa kuba ifuna umgudu omkhulu, akusoloko kulula.
Okweli nqanaba, ugqirha wakho unokuqalisa ukugonyela inaliti ye-cortisone. I-Cortisone yi-steroid ethi, xa ichaphazeleke ngokudibeneyo, (kwiimeko ezininzi) inokunceda ukunciphisa iintlungu edolweni. Nangona kunjalo, uphando lubonakalisile ukuba isiphumo sidla ngokuncipha emva kweenyanga ezimbini kwaye ukuba kwixesha elide ezo zinaliti zingakhokelela ekonakaleni ngokudibeneyo (2). Amachiza anamandla nawo anokuphakanyiswa, kodwa ngelishwa lelona lungiselelo linamandla ngakumbi, iziphumo ebezingalindelekanga ezinokubakho.
Ijinja inokucetyiswa kuye nakubani na onesifo samathambo - kwaye kuyaziwa ukuba le ngcambu inenye Uninzi lwezinye izibonelelo ezifanelekileyo zempilo. Kungenxa yokuba ijinja inefuthe elinamandla lokuchasana. Abantu abaninzi abane-osteoarthritis basela ijinja njengeti -Kwaye emva koko ukhethe ukuya kuthi ga kathathu ngemini ngamaxesha apho ukudumba kumalungu kunamandla kakhulu. Unokufumana iindlela ezahlukeneyo zokupheka kule nto kwikhonkco elingezantsi.
Funda: -Izibonelelo ezi-8 zeMpilo eziNcomekayo zokutya ijinja
Isigaba sesi-4 sisigaba sesihlanu kunye nesona sikhulu se-osteoarthritis - abantu abahlelwe kuloluhlu bahlala bebona intlungu enkulu kunye nokuphazamiseka xa behamba okanye behamba emadolweni. Intlungu ibangelwa yinto yokuba umgama odibeneyo ngaphakathi kwedolo elihlangeneyo ngeli xesha uye wancitshiswa kakhulu kwaye wancitshiswa- oko kuthetha ukuba phantse yonke intlala-mfuma igugile kwaye ishiya ukuqina, phantse ukungahambi, idolo elihlangeneyo.
Ukuncitshiswa kwemeko yendawo ngaphakathi emadolweni kuthetha ukuba kukho ukungqubana okukhulu kunye nokuxabana phakathi kwezakhiwo ezahlukeneyo ze-anatomiki- ezinceda kuphela ukwandisa iintlungu kunye neempawu. Umsebenzi uhlala uncitshisiwe kangangokuba isiguli asinakukwazi ukuhamba ngaphandle kwentlungu ebukhali- kwaye ke iindlela zonyango ezinamandla zihlala ziqwalaselwa ngeli xesha.
Utyando kunye neprosthesis?
I-Knee prostheses, nokuba kukwenziwa kwamazinyo okanye amazinyo apheleleyo, yinto yokugqibela yabantu abanesifo samathambo esibanzi. Kwinkqubo enjalo yotyando, ugqirha wotyando uya kulisusa ilungu lonke elonzakeleyo aze emva koko alibuyisele ngeplastikhi okanye ngeplastikhi yesinyithi. Iziphumo ebezingalindelekanga zalo msebenzi zinokubandakanya usulelo kunye nokuqina kwegazi. Ixesha lokubuyisela kwimo yesiqhelo lihlala lithatha iinyanga ezininzi- kwaye kuthetha ukuba kufuneka ungqine kakhulu ekwenzeni imithambo yoqeqesho oyifumeneyo.
Nokuba unyamezele ngedolo lobuhlungu, kubalulekile ukugxininisa ukuba kusafuneka ujonge kumanyathelo anegalelo kwimpilo yamadolo elungileyo. - njengokugcina ubunzima obuqhelekileyo kunye nokuzilolonga okuthile. Mhlawumbi unganxibelelana nomzimba we-physiotherapist okanye i-chiropractor yanamhlanje ukuba awuqinisekanga ukuba loluphi uhlobo lomthambo ekufuneka ulwenzile?
Abahambisa iinzwane (esetyenziselwa ukwahlula iinzwane kwaye ke ukuthintela iinzwane ezibotshiweyo- ezinje nge-hallux valgus, iinzwane ezinkulu ezigoqileyo)
Funda: -Izibonelelo ezi-7 zeMpilo eziMnandi zokuTya iTurmeric
(Landela kwaye uphawule ukuba ufuna senze ividiyo ngeenzipho okanye iingqiniba zengxaki yakho)
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/de-5-stadiene-av-kneartrose.jpg?media=1648573622 368 700 ubuhlungu https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ubuhlungu2018-10-06 09:02:332021-03-24 14:47:04Izigaba ezi-5 zeKneartrose
Amanyathelo a-8 aNyango oNxamnye noTyhefu ngokuchasene neRheumatism Iimpawu ezi-6 zokuqala zeOsteoarthritis